Farihy Lehibe any Etazonia | Fitsangatsanganana tanteraka
Farihy goavambe any Amerika
Eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Kanada sy Etazonia dia misy farihy dimy lehibe izay manjaka amin'ny faritany midadasika ary misy ny rano madio lehibe indrindra eto an-tany mifantoka: Michigan, Superior, Ontario, Huron ary Erie. Na dia mihetsika toy ny ranomasina mihidy aza izy ireo, ny ranony dia madio sy mirakitra tsy latsaky ny ampahadimin'ny tahirin'ny tany.
Ireto farihy lehibe dimy ireto dia manolotra morontsiraka, hantsam-bato, dongom-bato marobe, trano jiro maro be, nosy izay feno morontsiraka sy tanàna fialan-tsasatra. Tsy mahagaga raha nantsoina hoe "morontsiraka fahatelony" satria ireo farihy ireo no fonenan'ny karazam-biby maro karazana. Ho fanampin'izany, ny sambo amin'ny karazan-karazany rehetra dia mivezivezy amin'ireo rano mivelatra be dia be ireo ary matetika ny mpanjono sy ny tia kayak no mifangaro amin'ny sambo, sambo mpitondra entana, sambo fitaterana sns.
Ny fitsidihana ireo farihy lehibe dimy any Amerika dia hevitra tsara ho an'ny fialantsasatra mahafinaritra. Raha izany no anao ary te-hitsidika azy ireo ianao dia hahita bebe kokoa momba ireo zava-mahatalanjona voajanahary ireo.
1 Farihy Michigan
2 Farihy ambony
3 Farihy Ontario
4 Farihy Huron
5 Farihy erie
Ny Lake Michigan dia iray amin'ireo farihy lehibe dimy any Etazonia fa io ihany no ao anatin'ny firenena manontolo satria ny hafa dia zaraina amin'i Canada. Izy io dia voahodidin'ny fanjakan'ny Wisconsin, Illinois, Indiana ary Michigan, izay antsoina amin'ny anaran'io farihy io ihany.
Ity farihy ity dia manana velaran-tany 57.750 kilometatra toradroa sy 281 metatra ny halaliny. Izy io dia heverina ho farihy lehibe indrindra ao amin'ny firenena iray ary fahadimy manerantany. Ny rano dia 4.918 XNUMX km toradroa ary ny Farihy Michigan dia miresaka valan-javaboary sy torapasika maro.
Olona manodidina ny 12 tapitrisa no monina amoron'ny morony, ny maro amin'izy ireo amin'ny toerana fizahan-tany kely izay miaina mifanaraka amin'ny fahafaha-omen'ny Lake Michigan. Ny fandaniana andro mitsidika ny farihy dia hevitra tsara hankafizanao ny natiora eny ivelany, miala sasatra ary miala amin'ny fanazaran-tena. Drafitra tena mahafinaritra ny mitaingina sambo hiampita ny farihy. Aorian'izay, tsy misy tsara noho ny manandrana ny nahandro eto an-toerana manan-karena salmon sy trout.
Any amin'ny moron'ny Farihin'i Michigan, ao amin'ny fanjakan'i Illinois, dia iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Etazonia: Chicago. Fantatra amin'ny anarana hoe Windy City, izy no tanàna fahatelo be mponina indrindra any Etazonia, aorian'ny New York sy Los Angeles.
Tanàna maoderina sy cosmopolitan izy io ary misy trano fonenana maherin'ny 1.100. Ny tranobe avo indrindra dia ny Willis Tower (antsoina ankehitriny hoe Sears Tower), fa tamin'ny taona 1920 dia ny Wrigley Building, izay ny tilikambo dia namboarina taorian'ny Giralda any Seville.
Ity farihy ity dia misy sisin-tany any Minnesota, Wisconsin, ary Michigan amin'ny ilan'ny Etazonia ary Ontario amin'ny lafiny Kanadiana. Ny foko Ojibwe dia niantso azy io hoe Gichigami izay midika hoe "rano lehibe" ary io no farihy rano velona lehibe indrindra manerantany. Mba hanomezana anao hevitra ny refy mahavariana azy, ny Lake Superior dia mety ahitana ny haben'ny Great Lakes hafa hafa sy telo hafa toa ny Lake Erie. Io no farihy lalina sy lehibe indrindra ary mangatsiaka indrindra amin'ny Great Lakes any Etazonia.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny tafio-drivotra ao amin'ny Lake Superior dia mamokatra onja mihoatra ny 6 metatra, saingy onja mihoatra ny 9 metatra no voarakitra. Mahagaga!
Etsy ankilany, ao anatin'io farihy io dia misy nosy maromaro izay ny lehibe indrindra dia ny Nosy Royale ao amin'ny fanjakan'i Michigan. Io kosa dia misy farihy hafa izay misy nosy. Na izany na tsy izany, misy nosy lehibe lehibe hafa ao amin'ny Farihy Superior ahitana ny Nosy Michipicoten any amin'ny faritanin'i Ontario sy ny Nosy Madeline any amin'ny fanjakan'i Wisconsin.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny farihy kely indrindra ao amin'ny Great Lakes any Etazonia dia ny Lake Ontario. Any atsinanana kokoa no misy azy io noho ny farihy sisa ary an'ny Canada sy Etazonia: ny faritra avaratra mankany amin'ny faritanin'i Ontario ary ny faritra atsimo mankany amin'ny fanjakan'i New York.
Toy ny amin'ny Lake Superior, dia misy nosy maromaro ihany koa, ny lehibe indrindra dia ny Nosy Wolfer, eo akaikin'ny Kingston eo am-pidirana amin'ny renirano St. Lawrence.
Raha miresaka momba ny foibem-bahoaka izay voatonona manodidina ny Farihin'i Ontario isika, dia hitantsika fa eo amoron'ny andrefan'ny lafiny kanadiana no misy ny fihaonambe antsoina hoe Golden Horseshoe izay misy olona manodidina ny 9 tapitrisa ary misy ny tanànan'i Hamilton sy Toronto. Amin'ny lafiny amerikana, ny morontsiraka no be dia be any ambanivohitra afa-tsy i Rochester ao amin'ny Monroe County (New York).
Any afovoan-tany, sahabo ho 30 kilometatra miala antsika, afaka mahita ny tanànan'i Syracuse isika ary mifandray amin'ny farihy amin'ny lakandrano. Mponina manodidina ny 2 tapitrisa no miaina eo amin'ny lafiny amerikana.
Lake Huron dia iray hafa amin'ireo Farihy Lehibe any Etazonia, indrindra ny habeny dia izy no lehibe indrindra faharoa amin'ny dimy ary fahefatra lehibe eto an-tany. Lehibe noho i Kroasia rehetra! Eo anelanelan'ny Etazonia sy Kanada no misy azy, any amin'ny faritra afovoan'i Amerika Avaratra ary iray amin'ireo notsidihina indrindra noho ireo endrika mahafinaritra, indrindra ireo mpizahatany.
Lake Huron no toerana nofidian'ny Amerikanina maro handany ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo. Mandritra ny vanin-taona fahavaratra, ny fitsangatsanganana dia voalamina manodidina ny manodidina mba hahafantarana ny natiora eo an-toerana ary koa ny firaketana ara-tantara akaiky ny Farihy Huron, toy ny Lighthouse. Ireo fitsangatsanganana ireo dia ahafahan'ny mpitsidika mianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ity habaka ity ary hahafantatra amin'ny antsipirihany ireo harena voajanahariny.
Ankoatr'izay dia misy koa ny hetsika rano toy ny kayak na ny antsitrika scuba. Na dia ny fitsangatsanganana amin'ny iray amin'ireo nosy an'arivony an'io farihy io aza. Rehefa tsy azo idirana izy ireo, dia afa-po ny olona manodidna azy ireo toy ny Turnip malaza, ny fotogenika rehetra amin'izy ireo miaraka amin'ny ala kesika fotsy any an-tampony.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny Farihy Huron dia feno nosy, ny ankamaroan'izy ireo dia any avaratra, ao anatin'ny fetran'ny sisintany ao Canada, dia ny Nosy Manitoulin, lehibe indrindra eto ambonin'ny planeta amin'ny farihy rano velona.
Ny farihin'i Erie no farany atsimo amin'ireo Farihy Lehibe dimy any Etazonia sy ny any amin'ny lalina. Any amin'ny sisintany miaraka amin'i Ontario any Canada no misy azy ary mifanila amin'ny fanjakan'ny Pennsylvania, Ohio, Michigan ary New York eo amin'ny lafiny amerikana.
Noho ny habeny (mitentina 25.700 173 kilometatra toradroa izy), dia heverina ho farihy voajanahary fahatelo ambin'ny folo eto an-tany. Afaka mivezivezy feno izy, manana haavo ambonin'ny haavon'ny ranomasina 19 metatra sy ny halalin'ny XNUMX metatra; Amin'io lafiny io dia io no farihy farany ambany amin'ny Farihy Lehibe amin'ny ankapobeny.
Io no farihy farany nahitana azy ary ireo mpikaroka frantsay izay nanao izany dia nanome azy ny anarana hoe Lake Erie araka ny foko teratany mitovy anarana nonina tamin'io faritra io.
Toy ny amin'ireo farihy hafa, misy nosy maro koa ao amin'ny farihin'i Erie. Amin'ny fitambarany dia misy efatra amby roapolo, sivy amin'izy ireo dia an'i Canada. Ny sasany amin'ireo nosy lehibe kokoa dia ny Kelleys Island, South Bass Island, na Johnson's Island.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny Lake Erie dia manana microclimate manokana, izay mahatonga ity faritra ity ho lonaka ho an'ny voankazo, legioma ary voaloboka maniry amin'ny fanaovana divay. Ny Lake Erie dia malaza ihany koa noho ny tadion-dranomasin'i Lake Effect izay atsipy any amin'ny faritra atsinanana amin'ny tanàna, hatrany Shaker Heights ka hatrany Buffalo. Izany dia mitranga amin'ny faramparan'ny ririnina sy ny fiandohan'ny lohataona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Farihy goavambe any Amerika
Ny angano momba ny Amazona
Kolkata, anisan'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any India